10 Isbeddello oo laga daawan karo Suuqgeynta Dijital ah ee 2016 | Martech Zone
10 Isbeddello ah oo laga daawan karo Suuqgeynta Dijital ah ee sanadka 2016
Jimce, Maarso 18, 2016 Jimco, Nofeembar 17, 2017 Douglas Karr
Waxaan heysanaa podcast suuq geyn weyn oo soo socda halka aan ka wada hadalno isbeddelada cajiibka ah ee ka dhacaya gudaha suuqgeynta suuqgeynta suuqgeynta dhijitaalka ah Laakiin suuqgeynta dhijitaalka ah waxay sii waddaa inay u marto isbeddello aan caadi aheyn sidoo kale. Faahfaahintan ka socota Cube wuxuu tilmaamayaa kii ugu dambeeyay ee ay tahay in suuqyayaashu ay kormeeraan sanadka 2016.
Waa kuwan 10 Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah
Ku noqo on Investment - Infographic wuxuu ka hadlayaa ka gudubka mitirrada aan micnaha lahayn sida taraafikada iyo saamiyada, laakiin waxaan aaminsanahay in isbeddelka daawashada la hagaajiyay dhaca gudahood Analytics qalabka.
Ka fikir Caalamka halkii aad ka ahaan lahayd Deegaanka - luqado kala duwan, turjumaad waqtiga-dhabta ah, iyo caalamiyeynta ayaa dhamaantood suurtagal ka dhigaya in ganacsigu uu noqdo mid caalami ah. Ma aha in la xuso in rarku horey u taageeray.
waxkabadalka - kaqeybgalka iyo sicir baddalku waxay kordhayaan marka farriimaha la shakhsiyeeyo iyadoo lagu saleynayo waqtiga, dabeecadda, tirada dadka iyo goobta iibsadaha.
Soo ifbixida Sayniska Xogta - tiknoolajiyada xogta weyn ayaa hadda loo heli karaa dadka badan iyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay helayaan helitaanka xogta saadaalinta ee aysan waligood u maleyneynin inay macquul tahay.
Mudnaanta Moobilka - barnaamijyada moobiilka, warbaahinta bulshada, fiidiyowga, moobillada moobiilka, daalacashada mobilada ee goobta ku saleysan… Qalabka mobiilku wuxuu hadda udub-dhexaad u yahay hawlgalkeena khadka tooska ah.
Influencer Suuq - raadinta dadka iska leh rajadaada oo aad la shaqeyso iyaga si aad saameyn ugu yeelatid dhagaystayaasha ayaa leh natiijooyin aan caadi aheyn sida muujinta iyo kaqeybgalka raadinta ayaa yaraaday.
Hantidhowrka iyo Dhaqanka Weyn - Cube hadda la soo sheegay oo la taaban karo, laakiin ma hubo inay noqon doonto heshiis aad u weyn sida xaqiiqda la kordhiyay. Awoodda si kor loogu qaado la-hawlgalkayada adduunka aan ku nool nahay waxay umuuqataa inay leedahay fursado badan feker ahaanteyda.
Tusaha App - qalabka dhismaha ee ka caawinaya martida inay udub dhexaad u ahaadaan shirkad kasta joogitaankeeda suuq geynta dhijitaalka ah. Waxaan dhisnay a kalkuleylka beddelka unugga loogu talagalay soo saaraha kiimikada ee noqday kan ugu fiican warshadooda oo ay u adeegsadaan qof kasta oo ka mid ah suuqyadooda bartilmaameedka - taasoo horseedaysa wacyigelin weyn iyo beddelaad.
Teknolojiyada la qaadan karo iyo IoT - Suuqgeynta maxalliga ah iyo beegsashada tikniyoolajiyadaha la gashado waxay fursad weyn u siinaysaa shirkadaha in ay si toos ah ula falgalaan una riixaan farriinta halka ay rajada ama macaamilku ay fiirsanayaan.
Suuqgeynta Omni-Channel - Isu geynta suuqgeynta internetka iyo khad la'aanta ayaa isbedelay. Xitaa waxay soo celineysaa suuqgeyn dhaqameedka meesha fariintaada si fudud loo maqlo maxaa yeelay ma jiro tartan badan.
Tags: 2016xaqiiqda la kordhiyayxog weynsayniska xogtaisbeddellada suuqgeynta dhijitaalka ahganacsiga adduunkasuuqgeynta suuqgeyntainternet ee waxiotSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkatusmeynta barnaamijka mobiladaapps mobileshakhsi ahaaneedku soo noqo maalgashigaROIisbeddelladaisbeddellada si loo daawadonoqoshotechnology wearable
Toos u qor: Dukumiinti, Qorshee oo Fuli Istaraatiijiyadda Mawduucaaga
Tirakoobyada Dukaanka Khadka Tooska ah ee Dukaanka